“Prefet”-n’ny polisy Ravelonarivo Angelo Christian : “Handraisana fepetra ireo mpanao fihetsiketsehana tsy nahazo alalana” -
AccueilRaharaham-pirenena“Prefet”-n’ny polisy Ravelonarivo Angelo Christian : “Handraisana fepetra ireo mpanao fihetsiketsehana tsy nahazo alalana”
12/05/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy baranahiny. Miisa efatra ireo fangatahana izay voarain’ny prefektioran’ny polisy mangataka ny hanatanterahana hetsika ny faha 13 Mey ho avy izao. Eo ny etsy amin’ny kianjan’ny kanto, ny an’ny maître Olala etsy Andohalo, ny an’i Lalatiana Ravololomanana izay hametraka voninkazo fahatsiarovana etsy amin’ny lapan’ny tanàna, torak’izany ihany koa ny fangatahan’ny voalaza fa antokom-pivavahana iray izay nilaza fa hanatanteraka diabe aorian’ny fametrahan’izy ireo vonin-kazo manoloana ny lapan’ny tanàna. Novalian’ny “prefe”t-n’ny tanàna ity fangatahana hanatanteraka diabe ity, fa avy hatrany ity voalaza fa antokom- pivavahana ity dia hivantana etsy amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina. Ireo hetsika hita fa tsy hiteraka korontana dia nomena alalana hoy ny “prefet”-n’ny tanàn’ Antananarivo jeneraly Ravelonarivo Angelo Christian . Izany hoe ireo hetsika izay mihidy anaty toerana voafefy sy manaraka ny fepetra ny fandriampahelamana. Hetsika izay tsy nolavina ihany koa ny fanaterana voninkazo etsy amin’ny lapan’ny tanàna, saingy nanambara ny “prefet”-n’ny polisy fa vita avy hatrany ny hetsika vao vita ny fanateram-boninkazo. Noho izany dia tsy tokony hisy hivoahana araka izay voarakitra anatin’ny fangatahany ireo izay hanatanteraka hetsika ireo.
Mazava hatreto aloha izany fa ireo ihany no nangataka hanatanteraka hetsika voarain’ny “prefet” eo am-pelatanany hatramin’ny androany. Noho izany ireo izay tsy naka alalana kosa dia midika avy hatrany fa mandika lalàna. Toa ny hetsika izay tanterahin’ny RMTF miara- dia amin’ny tarik’i Joseph yoland ary ny pastora Edouard tsarahame, izay nilaza mazava fa tsy hangataka fahazon-dalana satria hetsika fahatsiarovana ny tolon’ ireo tia tanindrazana ny androan’ny faha 13 ny volana Mey. Izy ireo izay efa re tamin’ny haino aman-jery maro fa miantso vahoaka, hidina an-dalambe. Hatreto dia ny filazana amin’ny fanaterana voninkazo etsy amin’ny kianja ny 13 Mey no ho tanterahin’ireto olom-bitsy izay mitady hanakorontana ireto. Noho izany, nanambara ny “prefet” fa efa misy ny fandraisana andraikitra manoloana ny fihoaram-pefy raha toa ka misy izany.
Mikasika ity hetsika izay ho tontosain’ny RMTF sy ny tarik’i Joseph Yoland ary ny pastora Edouard Tsarahame ity , dia fantatra izao fa nisy ny fihaonan’izy ireo tamin’i Andry Rajoelina izay efa eto Madagasikara. Raha ny fanazavana efa nomen’ireo mpitarika ny hetsika, tsy naka alalana amin’ny 13 Mey ireo miampy ny fihaonany tamin’ny filohan’ny tetezamita teo aloha, dia azo ambara fa fanomanana fanakorontanana avy hatrany no tian’izy ireo hatao. Manamporofo ny voalaza teto amin’ny gazety triatra omaly laharana 301 ny zava – mitranga amin’izao fotoana, fa misy ny fatahorana fifidianana avy amin’ ny mpanohitra ka tonga amin’izao fiketrehana fanakorontanana izao